Fadeexad baasaboor oo ka taagan dalka Turkiga - WalWaal Online News and Information about Somalia
Home Wararka Fadeexad baasaboor oo ka taagan dalka Turkiga
Fadeexad baasaboor oo ka taagan dalka Turkiga
Muqdisho (Walwaal.com)- Dowladda Turkey ayaa Isniintii sheegtay inay ballaadhisay baadhitaan lagu sameynayo tobaneeyo qof oo adeegsaday baasabooro gaar ah, oo ay dowladdu bixisay, si ay hab sharci ag ugu galaan Yurub, balse aan dib usoo laaban.
Fadeexaddan ayaa qabsatay warbahainta gudaha tan iyo markii ay soo shaac baxday tododbaadkii tegay in 43 qof oo sitay baasaboorka gaarka ah ee midbka cowlka, ama loo yaqaan Grey Passport, ay bishii November galeen Jarmalka, si ay uga qeyb-galaan tababar ku saabsan deegaanka, hase yeeshee aysan dib ugu soo laaban Turkey.
Baasaboorka loo yaqaan Grey Passport ayaa ah mid gaar ah oo dowladda ay u sameysay dadka u shaqeeya dowladda ee howlaha shaqo ugu baxa dibedda, taasi oo u ogolaata inay visa la’aan ku galaan dalal badan.
Wasaaradda Arrimaha Gudaha ayaa bayaan ay soo saartay Isniintii ku sheegtay in baaritaanka lagu sii ballaadhinayo lix dowlad hoose oo ay ku jirto magaalada Ordu ee ku taalla Badda Madow.
Lixdan dowlado hoose ayaa isgu jira kuwa ay maamulaan maayaro ka kala tirsan xisbiga talada haya iyo axsaabta mucaaradka.
Toddobaadkii tegay ,Wasaaradda Arrimaha Gudaha ayaa shaqada ka joojisay badhasaabka gobolka Malatya iyo laba sarkaal oo sare oo ka mid ah mas’uuliyiinta gobolka, sababo la xiriira fadeexaddan.
Previous articleCOVID-19 oo weli ku sii faafaya Soomaaliya iyo dad badan oo maanta laga helay
Next articleMinneapolis oo lagu soo gebagabeeyay dhegaysiga dacwada askarigii dilay George Floyd